The iPriest: Dọla atinyela ọnụ n'okwu na-esere ndi aku na ndi mmanu - Alisonomi
Dọla atinyela ọnụ n'okwu na-esere ndi aku na ndi mmanu - Alisonomi
A na-ekwu nke a ka a na-ekwukwa nke ọzọ. Akụkọ na-eruta anyi nti si na ọkwa onye isi na-achi Naijiria tiri gbasara etu esi ebubata ihe a na-eri eri n'obodo anyi bu Naijaria aghọla iwu. N'ọkwa o tiri mgbe afọ anyi nọ n'ime ya di ọnwa atọ, onye isiala si na etụ esi na-atubata ohi oriri n'ala anyi na-eme ka ọrụ ugbo ghara iga n'iru na Naijiria. Ọ siri na-agbanyeghi mbọ govamenti ya na-agba ime ka ndi na-akọ ugbo rie nri ma racha aka ha, ndi na-atubata nri di iche iche n'ala anyi na-atinyere ya aja na garri. Na mbu, ihe onye isi ala kwuru bu nani ndumọdu. Mana mgbe ọ chọputara na ndi mmadu ka-esi ụzọ nzozo na-atubata nri ndi ahu, ka ọ mara n'egwu o bidoro abughi nke achi utaba n'aka agba. Maka nke a, o nyere onye isi na-eleta nnụkwụ ụlọ na-ebiputa ego n'ala anyi Naijiria iwụ ka ọkwụsi inye ndi na-ebubata nri di iche Dọla. Onye isiala kwuru na Naijiria na-akọ nri di iche nke mere na anyi etosighi ibubata nri ndi ahu. Na-agbanyeghi na ụfọdu ndi nnukwu mmuta chere na iwu di etu ahu di mkpa ma ọ buru na Naijiria chọrọ inwere onye ya n'ihe gbasara ikọ ọrụ ugbo ma ọ bụ izu anu ohia, ndi ọzọ chekwara na onye isiala kara iche ya nke ọma tupu o tie iwu ahu. Ndi ikpe azu a siri na Naijiria nwere nnukwu nsogbu sitere n'ọnọdu agha anyi na-aluso ndi Boko Haram nakwa ọgu ndi na-akọ ugbo na ndi na-azu anụ ohia na-alu. Ọ bu maka nke a ka ha siri na tosiri iburu ụzọ zota ala tupu anyi azoba ute.
Posted by The iPriest at 2:24:00 am